Sọpụrụ Band 6, nyocha, njirimara na ọnụahịa | Gam akporosis
Anyị achọworị ịnata Na-asọpụrụ Band 6 ma anyị mechara nwee ike ịnwale ya. Taa, anyị na-agwa gị n'uju ihe ọhụụ ọhụụ ọhụụ sitere na Honor, Huawei, nwere ike ịnye anyị. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-eme ihe nkiri nwere ike ime ihe ọ bụla, nyochaa ihe omume egwuregwu gị, ihi ụra, ma soro ekwentị gị na-efunahụ nkọwa.
The Honor Band 6 abịarute stomping na-enye ọkpụrụkpụ ndozi tụnyere ya ụzọ, The Honor Band 5. Anyị nwere ike ịsị, ịmalite ikwu banyere ihe a wearable, nke dị usoro ole na ole n'elu ihe anyị ka ghọtara dị ka mgbaaka ọrụ. Ọ dị nso na ihe anyị maara dị ka smartwatch maka ihe niile ọ na-enye anyị.
1 The Honor Band 6, ọ bụ smartwatch?
2 Egwuregwu egwuregwu na ọtụtụ ụdị
3 The Honor Band 6 na-eche banyere ahụike gị
4 Top atụmatụ na a niile price
5 Nkọwa Honor Band 6
The Honor Band 6, ọ bụ smartwatch?
Anyị ahụla n'ahịa ma nwalee ọtụtụ smartwatches na ọbụna na-akpọ onwe ha n'ụzọ ahụ dị anya na ihe Honor Band 6 "mgbaaka" na-enye anyị, karịa ịbụ ndị na-eme ngosipụta nke ịmalite ihe ọ nwere ike ịbụ smartwatch asọmpi na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri, na-ahọrọ ịkpọ ya "band" ma nye ihe nwere ike ịbụ mgbaaka kachasị arụ ọrụ na ahịa ugbu a. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ịchọrọ iwere nzọụkwụ a wearable, ebe a ị nwere otu n'ime ohere ndị kachasị adọrọ mmasị, maka ihe ọ na-enye anyị na maka ọnụahịa ya, nweta Sọpụrụ Band 6 na koodu ego Eprel04.
Ndị ejiri ụdị dị warara ma pere mpe jiri smartbands nwere ike ịchọta Honor Band 6 ntakịrị nnukwu. Na eziokwu bụ na agbaji mkpa wearable ọkọlọtọ a bit na-eme ka itu ukwu ka a ukwuu ibu square ihuenyo. Ma ihe ụfọdụ nwere ike ịbụ "megide" ọtụtụ ndị ọzọ bụ doro anya ihe dị mma. Nwee ihuenyo 1,47 sentimita Dịka ọmụmaatụ, na-eme ka ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ data mmemme egwuregwu nwee ike iru ala.
Egwuregwu egwuregwu na ọtụtụ ụdị
Dị ka anyị na-ekwu, Honor Band 6 nwere a imewe ihe ndị ọzọ yiri nke smartwatches enwere ike inweta. Mpempe ihuenyo ya na-eme ka ahụ dum nke wearable buru ibu. Iche iche onwe ya nke ọma na asọmpi kachasị dị ka Xiaomi Mi Band, ọbụnakwa na-enye a mgbanwe ama ama ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga Sọpụrụ Band.
una zuru agba Amoled ihuenyo mmetụ ya na diagonal nke 1,47 sentimita asatọ na a 194 x 368 mkpebi ọ bụ ihe na, n'enweghị obi abụọ, na-eme ka ya tinye onwe ya ụzọ karịa nhọrọ ọ bụla ọzọ. Na ọnụahịa anyị nwere ike ịtụ anya na smartband "ot", Honor Band 6 na-enye ahụmịhe onye ọrụ na-enye afọ ojuju. Ruo 148% karịa ihuenyo karịa ọla aka ndị ọzọ nke ọrụ.
N’ikwu okwu banyere ụdị egwuregwu ya, Honor Band 6 bụ ngwa ị na-achọ iji chịkwaa egwuregwu egwuregwu gị. Anyị nwere ụdị egwuregwu iri dị iche iche gụnyere ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri ma ọ bụ ọzụzụ n'efu. Mgbaaka n'onwe ya na-egosipụta ụdị egwuregwu anyị na-arụ na-akpaghị aka. Ma ị gaghị echegbu onwe gị banyere mmebi mmiri mmiri, mkpokọta kọmpụta na mmiri na-adịghị mma na-eme ya submersible ruo 50 mita.
Jide nke ọhụụ 6 na ọnụahịa kacha mma na koodu ego Eprel04
The Honor Band 6 na-eche banyere ahụike gị
Un obi na-enyocha obi nke na-aga n'ihu na njikwa ọrụ 24 na-arụ ọrụ nke anyị nwere ike hazie izipu mata mgbe arrhythmias ma ọ bụ ihe ndị na-adịghị mma na-achọpụta. Anyị anaghị ekwu banyere electrocardiogram n'onwe ya, mana ọ nwere ike ịnye ozi a pụrụ ịdabere na ya mgbe ịchọpụta nsogbu.
Obi nha mmetụta nke onwe ya Ọ na-enye anyị ọgụgụ nke ọbara oxygen saturation. Ozi dị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu na-achọ inweta ihe ndekọ nkwụsi ike ma nwee ike iku ume ha. Sochie nzọụkwụ gị, ike calorie ma ọ bụ oge mgbatị ahụ kwa ụbọchị.
The nnukwu protagonist na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke a ya mere, ezigbo ihe omuma ihe omimi bụ TruSeen 4.0 ngwa anya ihe mmetụta, nke Huawei mepụtara ma jiri ya na smartwatches ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ. The Honor Band 6 na-enyekwa nhọrọ iji nyochaa oge ịhụ nsọ na kalenda yana ncheta. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịnwe rNkọwa zuru ezu banyere ogo ụra anyị. Younwere ike idekọ usoro ụra dị iche iche wee nye anyị ozi maka mmelite na ntụnye ga-ekwe omume.
Top atụmatụ na a niile price
Otu n'ime nkọwa anyị na-ele anya mgbe anyị ga-azụta ngwaọrụ eletrọniki ọ bụla bụ batrị. Ibu na nnwere onwe nke wearable nwere ike ịnye nwere ike ịbụ ihe mere ị ga-eji kpebie otu ma ọ bụ ụdị ọzọ. Honor Band 6 kwụpụtara na nnwere onwe. O nwere ibu 180 mAh nke nwere ike iyi obere dị ka mkpa, mana ekele maka etu esi arụ ọrụ ike ọ na - enweta ruo ụbọchị 14 nke nnwere onwe. O bu ihe ichoro? Echerela ogologo oge ma zụta site na ịpị ebe a Honor Band 6 ma cheta iji ego coupon APR04.
Anyi aghaghi ikwu na site n'iji ihe omimi 6 karie ihe ike, belata ikike ya n'ime ubochi ole na ole. Ruo ụbọchị iri anyị enweela ike iji mgbaaka na-eji ya eme ihe ọbụlagodi njikwa ụra. Ezigbo data na-atụle ike oriri nke nnukwu agba ya. Na mgbakwunye, nke mere na batrị ya abụghị ihe mgbochi na ụda gị, Honor Band 10 nwere magnetik ngwa ngwa odori usoro. Na naanị nkeji iri nke ịkwụ ụgwọ ị ga-enwe ruo ụbọchị 3 nke nnwere onwe. Na obere karịa otu awa ị nwere ike ịnwe 100% zuru ụgwọ.
Ihe omuma ozo nke enyere ohuru nke Honor oru mgbaaka bu nnukwu gallery nke ngalaba. Nhazi onwe onye bu ihe ndi oru ji aru oru. Inwe ike ime ka smartband gị karịa "nke gị" mgbe niile. Anyị hụrụ katalọgụ na-adịghị agwụ agwụ ihe karịrị 100 dị iche iche ohere. Enwekwara ohere dị iche iche maka njikọta eriri na agba ga-enye Band 6 gị ụdị nke gị.
N'ihi ihe niile Honor Band nwere ike ịnye ma ọ dịkarịa ala ọnụahịa asọmpi, anyị nwere ike ijide n'aka na n'oge na-adịghị anya ọ ga-abụ nnukwu ahịa. Ọkwa dị elu n'ọtụtụ ngwaahịa a, Honor enyewo oke ụda na tebụl na onye a nwere ike weara ịrụ ọrụ na ọnụahịa agaghị agbakọ asọmpi ahụ.
Nkọwa Honor Band 6
Nlereanya Band 6
Ihuenyo 1.47 sentimita
Mkpebi Pikselụ 194 x 368
Batrị 180 mAh
Mmiri mmiri submersible ruo 5 igwe ndọrọ ego
Ebe nchekwa RAM 128 MB
Akụkụ X x 112 9 4 cm
Ibu ibu 69 grams
Ahịa 42.50 €
Linkzụta njikọ Na-asọpụrụ Band 6
Ego ego Eprel04
Ihuenyo 1.47 nke anụ ọhịa jupụtara
Nwere onwe ruo ụbọchị iri na anọ
Nzube na nhazi nkeonwe
Eriri ọcha na-eru unyi n’oge adịghị anya
Ibu nwere ike buru ibu maka ụfọdụ bebi
Na-asọpụrụ Band 6
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Sọpụrụ Band 6, nyocha, njirimara na ọnụahịa